Kaddib Markii Uu Suarez Ku Wargeliyey Inay Beddelkiisa Doontaan, Barcelona Oo Isha Ku Haysa Shan Weeraryahan | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Kaddib Markii Uu Suarez Ku Wargeliyey Inay Beddelkiisa Doontaan, Barcelona Oo Isha Ku Haysa Shan Weeraryahan
(02-11-2018) Luis Suarez ayaa bisha January ay da’diisu noqon doontaa 32 jir, waxaanay kooxdiisa Barcelona ku qasban tahay inay suuqa u gasho beddelkiisa, hase yeeshee inta aanay kooxdu qaadanin go’aan ay ku doonato ciyaartoy cusub, waxa miiska is keenay Suarez oo si badheedh ah warbaahinta uga sheegay in loo baahan yahay beddelkiisa in la diyaariyo.
Suarez oo Barcelona ay sannadkii 2014 kasoo iibsatay Barcelona ayaa 212 kulan oo uu u saftay waxa uu u dhaliyey 158 gool oo kuwii ugu dambeeyey ay ahaayeen saddexley uu ka dhaliyey Real Madrid.
Haddaba, wargeyska Marca ayaa soo bandhigay shan ciyaartoy oo weerarka ka ciyaara oo Barcelona ay isha ku hayso, kuwaas oo midkood ay u dhaqaaqi doonto si uu beddelka Suarez ugu noqon karo.
Cayaartoyga ugu horreeya ee Blaugrana ay diiraddeedu hayso, waa da’yarka kooxda Genoa ee Krzysztof Piatek oo 13 gool dhaliyey 11 ciyaarood oo xili ciyaareedkan uu saftay, waxaana laacibiinta kale uu ugaga wanaagsanaanayaa saddex arrimood oo kala ah da’diisa oo yar, lacagta ay ku heli karayso oo aan badnayn iyo mushaharkiisa oo naasilan.
Tallaabada labaad ee ay qaadi karto Barcelona, waa inay dib u soo ceshato Paco Alcacer oo xagaagii ay ka iibisay Borussia Dortmund, hase yeeshee qodob ka mid ah qandaraaskii uu kaga tegay ayaa waxa ku jiray inay dib ugu soo ceshan karto 23 milyan oo Euro.
Cayaartoyga kale ee magaciisu kusoo baxay warbixintan ayaa ah Nicolas Pepe oo toddoba gool iyo toddoba caawin ah ka sameeyey xili ciyaareedkan kulamadii uu u saftay kooxdiisa Lille ee dalka France. Da’diisu waa 23 sannadood, waxaanu ka ciyaari karaa weerar buuxa iyo garab, xili ciyaareedkii horena waxa uu saxeexay 13 gool.
Laba ciyaartoy oo kale oo aan ahayn gool-dhalinta saddexdan sare ayaa uu wargeyska Marca xusay inay diiradda Barcelona saaran tahay, waana Timo Werner oo ka tirsan kooxda reer Germany ee RB Leipzing iyo Lautaro Martinez oo dhawaan ay Inter Milan kasoo iibsatay Racing de Avellaneda.